Connection ကျနေစဉ် Gtalk, Facebook, etc. ဖွင့်နိုင်ရန် ~ မျိုးကို
Connection ကျနေစဉ် Gtalk, Facebook, etc. ဖွင့်နိုင်ရန်
08:10 G Talk, Gmail, Website Guide No comments
မကြာမကြာမေးပီး မေ့လွန်းလို့မို့ www.tramyanmar.net က ကူးယူပါသည်...။
Connection က အတိုင်းအတာ တစ်ခုထက်ပိုပြီးကျနေခဲ့ရင် Gtalk တို့ Facebook Chat တို့ကို ဖွင့်ဖို့အတွက် တော်တော် စိတ်ပျက်လောက်အောင် စောင့်နေရတက်ပါတယ်။ ရပြန်တော့လဲ Chat နေရင်းနဲ့လည်း connection က ကျကျသွားသေးတယ်။ အဲလို အချိန်မျိုးမှာ web ပေါ်ကနေဖွင့်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မသိ့သေးတဲ့သူတွေအတွက် အောက်မှာ Gtalk , Facebook, etc .. ဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက် Site ကောင်းလေးတွေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။